Askari Muqdisho ku dilay Hooyo Haysta Sideed Caruur ah – Radio Daljir
Febraayo 3, 2019 5:19 b 0
Askari ka tirsan Ciidamada Booliska ee ka howlgala degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, ayaa maanta toogtay Hooyo Soomaaliyeed oo heysata Sideed Caruur ah.
Hooyada la dilay oo lagu magacaabi jiray Xaawo Shiikhoow Faarax ayaa waxaa toogtay, iyadoo saaran Moota Bajaaj Askari ku sugnaa Isgoyska Bakaaraha qeybta xigta dhinaca degmada Howlwadaag, dhaawac daran oo ka soo gaaray rasaasta ka haleeshay qeybta sare ee jirka ayaa sababtay in marxuumada ay ku geeiryooto wadada intii Isbitaalka loo sii waday.
Saraakiisha Saldhiga booliska ee degmada Howlwadaag, ayaa ehelka u sheegay inuu gacanta hay’adaha amaanka ka baxsaday Askariga dilka geystay, balse ay socdaan howlgal lagu baadi goobayo gacan ku dhiiglaha.
Marxuum Xaawo Shiikhoow Faarax oo la toogtay, iyadoo ka soo laabatay Isbitaal ay howlo Caafimaad u aaday, ayaa Wiil ay dhashay oo lagu magacaabo C/Xakiin waxa uu madaxda dowladda ka dalbaday iney cadaalada horkeenaan askarigii dilka geystay.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mararka qaar dilal u adeegsada dadka Shacabka ah, kuwaasoo isaga baxsada meelaha ay wax ku toogtaan, waxaana dhowr jeer loo diray digniino la xiriirta iney arintaasi ka feejignaadaan, waloow aysan dheg jalaq u siin.